မောင်ယုပိုင် | လမ်းအိုလေး | Page 2
တကယ့်ဘ၀နဲ့ အိပ်မက်လည်း လိမ်နေမယ်
ကောင်းမွန်တဲ့ရုပ်ရှင်ထဲက မှုခင်းကို တကယ်ခံစားနေရပြီး
တကယ့်ဘ၀ကဖြစ်ရပ်မှန်ကို ရုပ်ရှင်ကြည့်သလို ခံစားနေမိတယ်
ဟုတ်တယ်၊ ဒေါသကုမ္မာရလိင်စိတ္တဇကလွဲရင် ဒီအသက်ဒီအရွယ်အထိ
ကျန်တာ ပျော်ရွှင်စရာအတုချည်း ဖြစ်လာတယ်
အရွယ်တစ်ခုမှာ လူဟာ ဒီလိုပဲ
လူဟာ ဒီထုံနေဟုန်နေတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ
ဒီလိုနဲ့ပဲ အရွယ်တစ်ခု ရလာလို့လား
ဒီလိုနဲ့ ဒီတစ်ခေါက် (မောင်ယုပိုင်)
ငါမသေဘူး ရေကူးတတ်ကြောင်းက ပြန်စမယ်
လူမသေတာ သေချာပြီဆိုတော့ ငွေရှားကြောင်းက ပြန်စမယ်
စိပ်ပုတီးလေးလက်က ခဏချ၊ လည်နေတဲ့တရားခွေရပ်သွားတဲ့အထိ အရေးဆိုမယ်
စေတနာက စားလို့ရသလား မေးမယ်
ငါ့အသီးဘယ်သူ ခူးသွားလဲ၊ ငါ့ဖိနပ်ဘယ်ကောင် မ,သွားလဲ
ရေစိုလက်နဲ့ ပလပ်ပေါက်ကိုင်မယ်၊ ခေါင်းရင်းပြတင်းပေါက် ဖွင့်အိပ်မယ်
ရပ်ကွက်ထဲလှည့် ကိုယ်တွေ့ဖြစ်ရပ်တွေ ပို့ချမယ်
မုသားစကား၊ သေးနုပ်သိမ်ဖျင်းသောစကားနဲ့ ယုတ်ရင်းကြမ်းတမ်းသောစကားကို ဆိုမယ်
တီဗီဖန်သားပြင်ကြီးဖွင့်လျက် (မောင်ယုပိုင်) – Cover Art
တီဗီဖန်သားပြင်ကြီးဖွင့်လျက် (မောင်ယုပိုင်) - Cover Art
Categories: Cover Arts | Tags: တီဗီဖန်သားပြင်ကြီးဖွင့်လျက်, မောင်ယုပိုင်, maung yu py | Permalink.
နေသာတဲ့ တစ်နေ့ဝယ် – ဥပမာ (မောင်ယုပိုင်)
ဘယ်သူမှ လေဟာနယ်ထဲမှာ ဖန်တီးကြတာ မဟုတ်သလို ဘယ်သူမှလည်း
Place တစ်ခုက လွတ်ပြီး မဖန်တီးနိုင်ကြပါဘူး၊ ဥပမာ ဟိုးရှေးရှေးတုန်းက
တိုင်းပြည်ကြီးတစ်ခုမှာ သိုးကလေ ပုပ္ပားနတ်တောင် အခေါင်မြင့်ဖျား ဥပမာ
တစ်နေ့သ၌ ကျွန်ုပ်တို့၏ မိတ်ဆွေကြီး ကိုနှင်းမောင်မှာ ဥပမာ မောင်လူအေး၏
စိတ်အတွင်းဝယ် မည်မျှပူပြင်းလာသည်ကိုကား ပြောမပြနိုင်၊ ဒီနေရာမှာ
မောင်ချောနွယ်ရဲ့ အသွားတွေ ဥပမာ ဥပမာ – ဥပမာများနဲ့တကွ
နေရာချပြီးသား Place တစ်ခုနဲ့ ဥပမာများမတွေ့ခဲ့တဲ့ Place တွင်းအရာတွေ
Place ဖြစ်တည်မှုရဲ့ မသိရသေးတဲ့ (Place) အရာတွေ၊ Placeနဲ့ ဖြစ်တည်မှု
အပြန်အလှန် အတိုင်အဖောက် ရက်ရှယ်ခဲ့တာတွေအပြင် ဥပမာ –
ဒီကနေ့မနက် အိပ်ယာထကတည်းက နေသာနေလေတော့၊ ယနေ့နေသာ၏
ဆိုတာ ၀င်လာတယ်၊ လေမလာ၍ ပူသည်ဆိုတဲ့ Placeတစ်ခုပါ
ဒါပေမယ့် တကယ်ကြုံနေရတာကို အထင်ဟပ်မိဆုံး
လေမလာ၍ ပူသည်ပါပဲ၊ ဒါပေမယ့် ဒီစာသားကို အက်စကီးမိုးတွေ ဖတ်မိသွားရင်တစ်မျိုး
ရက်အင်ဒီးယန်းတွေ ဖတ်မိရင်တစ်ဖုံ၊ ကျွန်တော်တို့ ကျွန်တော်တို့ဆိုရာမှာ
ပု၊ ပင်း၊ အင်း၊ တောင်၊ ညောင်ရမ်းနောင်၊ ကုန်းဘောင်နှစ်ခေတ်ခွဲကနေ တော်လှန်၊
ခေတ်စမ်း၊ ခေတ်ပေါ်၊ မော်ဒန်နဲ့ ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အထိ
ခံစားကြရဖွယ်၊ ထားပါတော့ လေမလာ၍ပူသည်က လေမလာ၍ပူသည်ပဲပေါ့
မူလတန်းဖတ်စာဥပမာနဲ့ စတင်ပြီး ရေအေးအေးပေးပါ ခရီးဝေးကလာရသည်များ
ရောက်မလာမီ ထားလို့မရ ဓမ္မဓိဌာန်ကျကျ စာမစီရ မကုံးရမီ ဘယ်Place ဘယ်
အင်စတီကျူးရှင်း ဘယ်အိုင်ဒီယော်လော်ဂျီကြောင့် ဥပမာ ရှေ့ရက်တွေက
Categories: Kabyarz | Tags: တီဗီဖန်သားပြင်ကြီးဖွင့်လျက်, မောင်ယုပိုင်, Kabyarz, lanolay, maung yu py, modernist poetry | Permalink.
သတိထားဖို့ တကယ်လိုအပ်လား သတိထား
ရေချိုးပြန်ရတာလည်း ရရှိတဲ့ ငါးတစ်မျိုးပဲလား
ဘယ်အယူအဆ ဘယ်ဝါဒရဲ့မျှားတံမှာ ချိတ်ထားတဲ့ အစာလဲ
ဘ၀က အဲဒီချိတ်ကိုရော မြင်နိုင်ရဲ့လား
အာကာသသည် လူတိုင်းနှင့်သက်ဆိုင်ပါသည်ဟူသော ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် (မောင်ယုပိုင်)
ဖိုက် ဖိုး သရီး တူး ၀မ်း ပြီးတော့ ဇီးရိုး
ဇီးရိုးပြီးတော့ ဇီးရိုး ဇီးရိုး ဇီးရိုး ဇီးရို့း
လုံခြုံရေးကင်မရာမှတဆင့် စောင့်ကြည့်နေသူတစ်ဦးရဲ့ အရေးပေါ်သတင်းပို့ချက်ကို
ဒစ်ဂျစ်တယ်ဒိုင်ခွက်မှာ ဇီးရိုးတွေ တန်းစီဖော်ပြနေ
အလို ဘုရားသခင်၊ အို ဘုရားဘုရား၊ ဘုရားရေ
မောင့်ပါးစပ်က အဲသလိုတွေ ထွက်လာလိမ့်မယ်လို့ ကျွန်မဘယ်တုန်းကမှ
ဘယ်ရောက်သွားပြီလဲ ဘုရားသခင် ဘယ်ရောက်သွားပြီလဲ
တုံဏိဘာဝေ၊ တံတွေးတမျိုမျို၊ လက်တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ဆုပ်နယ်
‘စိန်ခေါ်သူ’လို့ အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ ချယ်လင်ဂျာဟာ
၇၃စက္ကန့်နဲ့ နောက်ကောက်ကျသွားတယ်။ ဖိုက် ဖိုး သရီး တူး ၀မ်း
ကမ္ဘာလောကကြီးရဲ့ ဆွဲအားကနေလွတ်မြောက် နှုတ်ဆက်ထွက်ခွာ
ကြယ်မြင်လမြင် ချယ်လင်ဂျာဟာ့
Categories: Kabyarz, L=A=N=G=U=A=G=E | Tags: တီဗီဖန်သားပြင်ကြီးဖွင့်လျက်, မောင်ယုပိုင်, Kabyarz, L=A=N=G=U=A=G=E, lanolay, maung yu py | Permalink.
တစ်ခါတုန်းက မြို့တစ်မြို့မှာ မောင်ဘဆိုတဲ့လူငယ်တစ်ယောက်ရှိတယ်။ သူ့မှာ မိဘနှစ်ပါးနဲ့ ညီအစ်ကိုမောင်နှမသုံးယောက် ရှိတယ်၊ မောင်ဘငယ်ငယ်တုန်းက သူ့အိမ်မှာရှိတဲ့ လှေကားထစ် အမြင့်ကြီးကနေ ပြုတ်ကျဖူးတယ်။ သေကံမရောက် အသက်မပျောက် မောင်ဘဟာ စတုတ္ထတန်းကို အောင်မြင်ဖို့ အတော်လေး ကြိုးစားခဲ့ရရှာတယ်။ မောင်ဘဟာ ပန်းချီဆွဲခြင်း အနုပညာကိုလည်း အလွန်ဝါသနာပါသူ ဖြစ်တယ်။ တစ်နေ့မှာ ပန်းချီဆရာကြီး ဖြစ်ရမယ်လို့ စိတ်ကူးယဉ်မျှော်လင့်ခဲ့တယ်။ တစ်နေ့မှာ မောင်ဘဟာ မိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့ ချစ်ကြိုက်ခဲ့တယ်။ တစ်နေ့ကျတော့ မောင်ဘဟာ အသည်းကွဲရရှာတယ်။ မောင်ဘဟာ သူနဲ့သင့်တော်မယ်ထင်တဲ့ အလုပ်တစ်ခု ရွေးချယ်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိတယ်။ မောင်ဘဟာ အိမ်ထောင်ယူဖို့တော့ စိတ်ကူးမရှိသေးပါဘူး။ မောင်ဘဟာ ငိုတယ်။ မောင်ဘဟာ ရယ်တယ်။ မောင်ဘဟာ အောင်မြင်တယ်။ မောင်ဘဟာ ကျရှူံးတယ်။ မကြာမီမှာ မောင်ဘအကြောင်း အရေးအသားကို ကျွန်တော်အဆုံးသတ်တော့မည်ကို မောင်ဘမသိ၊ ရှေ့ဆက်ဘာတွေဖြစ်ဦးမလဲ မောင်ဘတွေးနေတယ်။ ။
Categories: Kabyarz, L=A=N=G=U=A=G=E, Prose | Tags: တီဗီဖန်သားပြင်ကြီးဖွင့်လျက်, မောင်ယုပိုင်, Kabyarz, L=A=N=G=U=A=G=E, lanolay, maung yu py, Prose | Permalink.
ကြောင် ပင့်ကူ မြွေ ဘက်တီးရီးယား
ဖက်ရှင် ၂၀၀၆ မေ
(၂၀၀၅ အောက်တိုဘာ Family Health ဂျာနယ်ပါ အကြောက်လွန်ရောဂါ ဆောင်းပါးမှ ရောဂါစာရင်းအား ပြန်လည်နေရာချအသုံးပြုသည်။)
Categories: Kabyarz, L=A=N=G=U=A=G=E | Tags: မောင်ယုပိုင်, Kabyarz, L=A=N=G=U=A=G=E, lanolay, maung yu py, post modern | Permalink.